Page2of 3	21. ကျောင်းသား ၉ ဦးအမှုကို တရားရုံးလက်ခံ	(2017)
... တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြဇာတ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်ပြီး စစ်ပွဲတွေအလိုမရှိဘူးဆိုတာကို အဓိကအနေနဲ့ ပြောချင် တာဖြစ်သလို ဘယ်သူ့ကိုမှ ထိခိုက်စေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြောတာမဟုတ်ဘဲ အနုပညာဖျော်ဖြေမှု ...	Created on 26 January 2017	22. ဝန်ကြီးချုပ်တွေကို အလုပ်လုပ် ခိုင်းဖို့ ပြော	(2017)
... ပညာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး၊ စိုက်ပျိုးရေး နဲ့ မွေးမြူရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ၊ လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး၊ မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုနဲ့ ...	Created on 25 January 2017	23. ညပိုင်း YBS သီးသန့် ယာဉ်တွေ ပြေးဆွဲမည်	(2017)
... အနုပညာမြောက် ပြင်ဆင်မွမ်းမံတဲ့ စီမံကိန်း ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားမှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် က ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ "ညဘက်မှာ ကားအခက်အခဲအတွက် ... ရန်ကုန်မြို့မှာ YBS ယာဉ်တွေ မပြေးဆွဲတဲ့ ည ၉နာရီကစပြီး ညပိုင်းသီးသန့်ယာဉ်တွေနဲ့ ...	Created on 25 January 2017	24. ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ တောင်ငူပညာရေးကောလိပ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် အမှာစကားပြောကြ	(2017)
Authors: နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး... Authors: နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး Read more http://www.president-office.gov.mm/?q=briefing-room/news/2017/01/23/id-11604 Created on 23 January 2017	25. လူမှုကွန်ယက်တွေရဲ့ သတင်းဖြန့်နိုင်စွမ်း	(2017)
... အစီရင်ခံစာတခုက သုံးသပ်ထားပါတယ်။ နည်းပညာပိုင်းအားနည်းတဲ့အစိုးရတွေကြောင့် ဘယ်လိုထိခိုက်မှုတွေရှိနိုင်သလဲဆိုတာနဲ့၊ လူမှုကွန်ယက်တွေကြောင့် သတင်း...လူမှုကွန်ယက်တွေပေါ်မှာ သတင်းတွေ မြန်မြန်ဆန်ဆန်သိနိုင်တဲ့အချိန်မှာ ...	Created on 23 January 2017	26. မုန်တိုင်းကြောင့် ကန်တောင်ပိုင်းမှာ သေဆုံးသူ ၁၆ ဦးရှိပြီ	(2017)
... မိုးလေဝသ ပညာရှင်တွေက သတိပေးထားပါတယ်။FG_AUTHORS: ဗီအိုအေ... ဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ ရာသီဥတုကြောင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတောင်ပိုင်းပိုင်းမှာ လူ ၁၆ ဦးထက်မနည်း သေဆုံးသွားခဲ့ရပြီး၊ လူတွေရဲ့ အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်လောက်တဲ့ ...	Created on 23 January 2017	27. တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်နေသည့် တိုင်းရင်းဆေးပညာရပ်များနှင့် ကုထုံးများ ပြန်လည်ဖော်ထုတ် မြန်မ	(2017)
Authors: နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး... Authors: နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး Read more http://www.president-office.gov.mm/?q=briefing-room/news/2017/01/19/id-11587 Created on 19 January 2017	28. မြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့ စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေး အင်ဒို အကူအညီပေးလို	(2017)
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ အကူအညီပေးတာတွေကို သာမက ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ တခြားဦးစား ပေးကဏ္ဍတွေမှာလည်း ကူညီသွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက ဒီကနေ့ပြောပါတယ်။FG_AUTHORS: ...	Created on 18 January 2017	29. တရုုတ်ပြည်က လူတူစက်ရုုပ်	(2017)
လူတွေနဲ့ အပြန်အလှန် စကားပြောနိုင်၊ ရာသီဥတု အခြေအနေ နောက် အမျိုးသား အမျိုးသမီး ကိုလည်း ခွဲခြားသိတဲ့ အမျိုးသမီးပုံစံ စက်ရုပ်တခုကို တရုတ် သိပ္ပံ ပညာရှင် တစုက တီထွင်လိုက်ပါတယ်။ AFP သတင်းတပုဒ်ကို မသိင်္ဂင်္ ...	Created on 09 January 2017	30. ညှဉ်းပန်းမှုဟာ ပုံမှန်ဖြစ်ဟန်တူကြောင်း ကန် ဒုဝန်ကြီး ပြောကြား	(2016)
... အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ ဟာရကာ အယ်လ် ရာကင်း အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဟာဗစ် တူဟား ဆိုသူဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမွေးပြီး ပါကစ္စတန်မှာ တာလီဗန်တွေထံက စစ်ပညာသင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုရည်ညွန်းပြီး အမေရိကန် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ...	Created on 08 January 2017	31. ၂၀၁၆ ရဲ့ ထိပ်တန်း နည်းပညာ ၁၀ ခု	(2016)
လူသားတွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေး အတွက် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ထဲမှာ အောင်အောင်မြင်မြင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ တီထွင်ကြံဆမှုတွေ အကြောင်းကို သိပ္ပံပညာရှင် ဒေါက်တာ ပဒေသာတင်က ...	Created on 04 January 2017	32. မကွေးတိုင်းအစိုးရနဲ့ ကျောင်းသား သမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တွေ တွေ့ဆုံ	(2016)
... သိရပါတယ်။ မနေ့က တွေ့ဆုံပွဲကို မကွေးနဲ့ ပခုက္ကူမြို့တွေက ဝိဇ္ဇာ သိပ္ပံ တက္ကသိုလ်တွေ၊ ဆေးတက္ကသိုလ်၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်နဲ့ ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ် စတဲ့ တက္ကသိုလ် ၈ ခုက ကိုယ်စားပြုသူ ၈ ယောက် ...	Created on 03 January 2017	33. မောင်တောဒေသ အမျိုသမီးကျောင်းဆရာများ ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ပြု	(2016)
အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်တွင်းက ပညာရေး ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီး ၁၈၀ ကျော်ကို နယ်ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။Authors: ဗီအိုအေ... အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ...	Created on 02 January 2017	34. ၂၀၁၇ မှာလူသုံးများလာမယ့် နည်းပညာများ	(2016)
5G အင်တာနက် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်၊ အင်တာနက်ကွန်ယက်ထဲမှာ တခုနဲ့တခုဆက်သွယ် ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ IoT ပစ္စည်းတွေအကြောင်းအပြင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်ထဲမှာ လူတွေရဲ့နေ့စဉ် နေထိုင်မှုဘဝအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်တဲ့ နည်းပညာသစ်တွေအကြောင်းကို ...	Created on 02 January 2017	35. စစ်ပွဲတွေရပ်ပေးဖို့ များများပြောကြဖို့ တိုုက်တွန်း	(2016)
... ငြိမ်းချမ်းရေးနှစ်အဖြစ် သတ်မှတ်နုုိင်ဖို့အတွက် အားလုုံးက ၀ိုုင်းဝန်းကူညီကြဖို့ကိုုလည်း ဒေါ်အောင် ဆန်းစုုကြည်က တုုိက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ ဆွေးနွေးမှုထဲမှာ ပါလာတဲ့ အချက်တွေအရ မြန်မာနုုိင်ငံပညာရေးစနစ်ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကိုု ...	Created on 01 January 2017	36. မန္တလေးစည်ပင်အသစ်တွေ ခန့်အပ်တော့မည်	(2016)
... စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဝင် ၆ ဦးနဲ့ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က တိုက်ရိုက်ခန့်အပ်မယ့် ပညာရှင် ၅ ဦးကို ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပြီး ၃ လကျော်အကြာ လာမယ့် ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့မှာ အတည်ပြုခန့်အပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေးမြို့တော် ...	Created on 31 December 2016	37. မောင်တောမြို့နယ်က ကျောင်း ဆရာမတွေကို ပြောင်းရွှေ့	(2016)
... ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ လာမယ့် ဇန်နဝါရီလကစပြီး ပြောင်းရွှေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ မောင်တောမြို့နယ် ပညာရေးမှူး ဦးခင်အောင် က ပြောပါတယ်။ "ပြေ... အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ...	Created on 31 December 2016	38. ၂၀၁၆ ခုနှစ်ထဲထူးခြားခဲ့တဲ့နည်းပညာများ	(2016)
၂၀၁၆ ခုနှစ်ထဲ ဆန်းသစ်တဲ့နည်းပညာတွေထဲက လူသုံးများ၊ လူပြောများစရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ နည်းပညာသုံးပစ္စည်းတွေအကြောင်းကို မစုမြတ်မွန်က ဘလော်ဂါတွေပြောသမျှ မှာအထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့ တင်ပြထားပါတယ်။
FG_AUTHORS: ...	Created on 26 December 2016	39. စိန့်မေရီ ခရစ်ယာန်ကျောင်းတော်ကြီး	(2016)
... ဘုန်းတော်ကြီးဖာသာ ဟန်းဒရွတ်ဂျေဆန်က သူ့ရဲ့ ဗိသုကာပညာနဲ့ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ခဲ့တာကြောင့် အရှေ့တောင်အာရှမှာ ဒီလို ဘုရားရှိခိုးက...သံထည်တွေမပါဘဲ အုတ်ချပ်တွေစီပီး ဘာဇင်တိုင်စတိုင်နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ ...	Created on 25 December 2016	40. ၂၀၁၆ မြန်မာနိုင်ငံ သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာ တိုးတက်မှု	(2016)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာ ဆိုင်ရာ တိုးတက်ဖို့ လုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ဓါတုဗေဒ ပညာရှင် ဒေါက်တာ ခင်မောင်ညိုရဲ့ အမြင်ကို ဒီတပါတ်မှာ ပြောပြပါရစေ။FG_AUTHORS: ဗီအိုအေ... ...	Created on 25 December 2016	StartPrev123NextEnd